Property Marketing Expert, Real Estate Broker
Ny Fitiavako dia fananana tsy manan-tsahala izay antsoiko hoe "Finds ..."
Tsy mbola mifandray amin'ny "miboridana" aho, koa maninona no mamorona orinasa manana trano fonenana mifanentana amin'ny bobongolo! Mpanjifa ara-barotra amin'ny tranoko aho, mpivarotra amoron-trano. Ny hevitra momba ny "Finds ..." dia nivelatra tamin'ny zavatra niainako manokana ho mpividy sy mpivarotra talohan'ny naha mpandraharaha ara-barotra.
Amin'ny maha mpividy ahy, te-hanana zavatra hafa aho. Te hanana fiainana tsy mahazatra aho. Te hanana trano izay hahatsapa ny toetrany tsy manam-paharoa ao an-trano aho. Ny fanatrarana izany toe-javatra izany amin'ny mpiasam-panjakana iray dia sarotra.
Amin'ny maha-mpivarotra sy tompon'ny tompona tsy manam-paharoa, rehefa tonga ny fotoana hivarotana azy ireo, dia fantatro fa tsy maintsy nanao ny ankamaroan'ny maha-tokana ny fananako. Hatramin'ny nivoahako tamin'ireo mpanoratra sy poety lava dia nanapa-kevitra ny hampiasa poezia aho mba hamaritana ny toetrako.
Tao amin'ny 1995 no nahaterahako ny orinasa. Ny foto-kevitra dia fanitarana marina ny toetranao tsy mahazatra. Toy ny tale mpanelanelana amin'ny New York Stock Exchange, nampifanaraka ny fitiavako ireo toetra tsy dia mahazatra aho, ny fahaizako momba ny varotra ary ny tononkalo, mba hamoronana ny orinasa. Special "Finds ..." ... Ny toetra mampiavaka ny mombamomba ireo izay misafidy zavatra avy ao amin'ny ordinatera.
Ny fahafahantsika misafidy dia mifantoka amin'ny fivarotana toetra tsy manam-paharoa sy mahazatra
Mitondra fananana ho an'ny fiainana aho!
"Nandritra ny taona maro dia niasa ho talen'ny Marketing aho ho an'ny New York Stock Exchange. Te hahazo fahafahana bebe kokoa noho ny Amerikana afaka manome ahy, nahazo ny lisansa NY Real Estate aho.
Rehefa niara-niasa tamin'ny orinasa sembana ara-barotra avy any ivelany aho, dia niady irery. 'Cookie cutter' na 'manamboatra masaka' dia tsy miasa mihitsy ho ahy, ka namolavola "Finds ..." manokana ho an'ny olona toa ahy aho - olona izay naniry zavatra hafa! Nosokafako ny birao manokana Special Finds voalohany ato amin'ny 1995 ao Asheville, NC, ary birao faharoa ao Hendersonville, NC ao 2003. Nivelatra ho tamina orinasam-pivarotana matihanina sy orinasa tsy miankina izahay. Miara-miasa amin'ny mpivarotra izahay ary mifantoka tanteraka amin'ny toetra tsy manan-tsahala.
Miara-miasa amin'ireo tompon-trano izahay manerana an'i Etazonia sy iraisam-pirenena. Manangana sy manolotra fanentanana an-tserasera manokana izahay. Mandeha lavitra kokoa izahay mametraka dokam-barotra amin'ny MLS eo an-toerana. Ny fifantohantsika dia ny manao izay ilaina mba hisarihana ny mpividy marina amin'ny trano tsy mahazatra. Azontsika atao ny manadihady ary manampy anao hahita mpitsikilo tsara ary manome ny fivarotana ny fanananao manokana.
Mba hiantefa ho toy ny "Find ..." manokana dia mila manana ny toetrany manokana ny trano iray. Mety ho tsara amin'ny toe-javatra tsara izy io, mahalana na sarotra ny mahita, matetika dia manana drafitra anatiny tsy manam-paharoa, mety ho tsy manam-paharoa, noho ny toerana misy azy na ny fomba fijeriny, mety ho trano antitra, trano maoderina maoderina , trano fonenam-pirenena na trano fonenan'ny tanàna iray, toeram-ponenana amoron-dranomasina na trano fidiovana any anaty ala.
Ny tranonao ve dia tena manokana?
"Poety aho ary mendrika ny tantara rehetra ny" Find ... ".
FIANGONANA NOSTALGIA - Ny varavaran'ny efijery dia mitsambikina toy ny ankizy mandehandeha ao amin'ny varavarana iray avy eo avy eo amin'ny hafa. Ny fihomehezana dia maneno manerana ny trano rehefa milalao afenina ny ankizy - 'n-mitady any amin'ny gilasy. Maniry dite mihinam-boankazo amin'ny vatolampy eo amin'ny lavarangana lavalava.
Ny lambam-pandriana iray dia manamboatra latabatra fisakafoana izay ahitana ny lemonade sy ny penina haka fanahy ny mpandalo. Nostalgia Cottage dia niaina tantara ara-tsosialy maro izay nanangonana namana sy vondrom-piarahamonina isan-taona isan-karazany.
Natsangana tao amin'ny 1908 avy amin'ny fianakavian'i Tanner fanta-daza, mipetraka amin'ny lalana eo amin'ny manodidina ny 3 acres izy. Vita fotsy mazava tsara, miaraka amin'ny tafo vaovao sy ny vaovao farany momba ny rafi-pitantanana, dia mandeha tsara ny fanavaozana azy.
Ny rindriny mafy dia mitazona tantaram-pitiavana, fitiavana ary avonavona, miharihary amin'ny antsipirihan'ny sasany amin'ireo endri-javatra tany am-piandohana izay mbola mitoetra - hazo avy amin'ny hazo avy amin'ny hazo.
APOGEE - Tahaka ny hahatratra ireo kintana ety ambony, dia feno ny mozika ny mozika. "Avereno daholo izany rehetra izany, tsy misy olona afaka mihaino anay!" Ary nanao izany izy ireo ... ary nandihy ry zareo. Niantso ireo namana, ary 17 minitra taty aoriana dia nihaona tamin'izy ireo tany afovoan-tanàna izy ireo mba hisakafo hariva.
Apogee, ao amin'ny 3950 cooler ', no laharana avo indrindra ao Asheville. Tsy miangona velively amin'ny 75-mile, mipetraka ao 14.6, fikojakojana ambany, rakotra ala maina, mizara ny sisin-tanin'i 25 mile amin'ny Blue Ridge Parkway. Miaraka amin'ny 6420 sq. Ft., Misy fomba fijery avy amin'ny efitrano tsirairay. Betsaka sy lava marobe no manasa fialam-boly na fandinihana. Ireto ny sasantsasany amin'ireo endri-tsoratra ambony: 2 master suites, tena mahavariana
trano fandroana, Crest's Nest ho an'ny kintana mijery; Tantara 2, vato voapetaka, kitay fandoroana kitay, lakozia goavambe, efitra malalaka sy malalaka, hazo sarobidy & ampahany; pandrefesana hafanana amam-bozaka, rafi-pandehanana an-tariby ary trano fitehirizam-bokatra mba hampidirana ny ascenseur. Asehon'ilay jiro eny an-tanànan'i Asheville. $ 1,395,000
Ny andalana BRENDA dia miseho any an-dohan'ny gazetiboky sy ny gazetiboky. TSY MISY VAROTRA IZANY.
SInce 1991, Brenda Thompson, Expert Marketing mpikaroka, Real Estate Broker, dia mifantoka amin'ny fanehoana toetra tsy mahazatra, mahatonga azy ireo hijoro amin'ny vahoaka ary hitondra azy ireo ho amin'ny fiainana. Manome fananana izy eo amin'ny fikarakarany, maha-izy azy ary mitantara ny tantarany.
Vakio ny Toko